Olona firy no halatsa-drà vao hanan-jo hifidy ny Afghana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2018 14:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Ελληνικά, Español, English
Ankizilahy Afghana manampy ny famoahana ny vatom-pifidianana avy ao amin'ny angidimby Mi-17 ao Jaghuri, Afghanistana, 16 septambra 2010. azon'ny rehetra ampiasaina. Sary nalain'ny Staff Sgt. Joseph Swafford.
Raha nifidy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena sy ho filoham-paritra tamin'ny taona 2014 ny olom-pirenena an-tapitrisany tao Afghanistana dia nisy nanao “selfie” niaraka tamin'ny rantsantanana afovoany misy ranomainty mba handefasana hafatra ho an'ny Taliban.
Efa-taona taty aoriana, handeha hifidy indray izy ireo ho an'ny fifidianana parlemantera, ny tontolon'ny fandriampahalemana mbola mampatahotra kokoa noho ny teo aloha.
Manodidina ny kandidà miisa 2.500 no hilatsaka amin'ny fifidianana parlemantera amin'ny 20 Oktobra araka ny lalana tamin'ny taona 2015.
Afghana maherin'ny 2.500 no be herimpo hirotsaka amin'ny fifidianana parlemantera izay misy loza mitatao amin'ny fiarovana ny ain'izy ireo. Efa fito sahady ireo kandidà novonoina.
Anisan'ireo tsy tonga hatramin'ny farany tamin'ny fifidianana i Saleh Mohammad Asikzai, kandida parlemantera avy any amin'ny Faritany Helmand atsimon'i Afghanistan, foiben'ny Taliban. Novonoina tamin'ny alalan'ny fanaovana vy very ny aina tamin'ny 9 Oktobra teo niaraka tamin'ny olompirenena miisa valo hafa izy ary voalaza fa avy amin'ireo mpiara-dia amin'ny ISIS ao Afganistana ilay nanao viveriniaina.
Ny iray hafa dia i Abdul Jabar Qahraman, avy ao amin'io faritany io ihany, izay novonoina raha nipoaka tao amin'ny biraony ilay antsoina hoe “baomba sofa” tamin'ny 17 Oktobra. Nataon'ny Taliban io fanafihana io .
Tsara vintana i Nazefa Yousufi Beg, kandidà vehivavy iray any amin'ny faritany avaratra-atsinanan'i Takhar. Nisy môtô iray voasesika baomba nipoaka nandritra ny famoriam-bahoaka tamin'ny fampielezan-keviny tamin'ny 13 Oktobra ary nahafatesana olona miisa 22 farafahakeliny, saingy tsy mbola niakatra an-tsehatra izy tamin'izay.
Tafavoaka velona tamin'ny fipoahana baomba izay nahafatesan'olona miisa 13 ary naharatrana olona miisa 30 mahery tamin'ny 2 Oktobra i Abdel Naser Momand, kandida avy any amin'ny faritanin'i Nangarhar.
Ny Taliban sy ny ISIS dia samy nivoady hanakana ny fifidianana parlemantera ao Afghanistana. Midika izany fa mety ho lasibatra mandritra ny faran'ny herinandro ny birao fandatsaham-bato miisa 5.000 izay arovan'ny mpiambina miisa 50.000.
Nanomboka aloha ny fikasana hanakana ny fifidianana. Olom-pirenena am-polony izay nisoratra anarana mba handatsa-bato no novonoina tamin'ny 22 Aprily rehefa nisy mpanao vy very ny ainy tamin'ny baomba nanapoaka izany tao amin'ny foibem-pifidianana iray tao Kabul tao anatin'ny fanafihana nataon'ny ISIS.
Sary manohina avy amin'ny fanaovana vy very ny aina tao Kabul, tao izy ireo mba haka karapanondro ka hisoratra anarana ho mpifidy amin'ny fifidianana parlemantera hoavy ao Afghanistana
Fito tapitrisa no voasoratra anarana?
Nilaza ny IEC fa olona efa ho fito tapitrisa no nisoratra anarana mba hifidy, saingy nitsipaka an'io tarehimarika io ny olona sasany ary nametraka ny ahiahy tamin'ny maha-ara-dalàna ny voka-pifidianana mialoha ny hanombohany.
Hamafiso ny vato: Na dia teo aza ny fanafihan'ny Taliban vao haingana, miomana amin'ny fifidianana ao Afghanistana ireo mpifidy
Fifidianana ao Afghanistana. Tsara indrindra.
Ny Fiaraha-mitantana Nasionaly ao Afghanistana, fiaraha-mitantan'ny antoko politika mpanohitra izay niforona vao haingana, dia niampanga ny governemanta sy ny IEC ho nanao hosoka, ary nilaza fa ambany ny isa tena marina. Manantena ny governemanta hiantoka ny kandidany ho mpandresy amin'ny fifaninanana ny toerana miisa 250 ny fiaraha-mitantana . Mety tsy hampiraika ireo mpifidy izay efa leon'ny parlemanta tsy matanjaka sy feno kiantranoantrano izany.
Tsy nisy hilaivana azy ny parlemanta farany. Tsy nanararaotra fotsiny ny fotoam-piasany ireo parlemantera fa meloka ihany koa tamin'ny fananganana ny tsy fifampitokisana, ny fanohintohinana ny tombontsoam-pirenena sy ny fanohanana ny fankahalana ara-poko. Andao hanova izany amin'ny alàlan'ny fifidianana ireo izay hamaly ny vahoaka
Ireo antoko politika mpanohitra mavitrika ao amin'ny GNCA dia nitanisa ny karam-pifidianana hosoka an-jatony ho porofo fa mikasa hanao hosoka amin'ny fifidianana ny governemanta. Nampiseho ny kara-panondro hosoka ho an'ny fampitam-baovao ireo solontena.
Nanao fihetsiketsehana ireo mpanao hetsi-panoherana manana fifandraisana amin'ny GNCA ary nanidy ny biraom-paritry ny IEC tany amin'ny faritany maro ho fitakiana ny mangarahara tamin'ny volana lasa.
Ny fampiasana ny rafitra biometrika any amin'ny ankamaroan'ny biraom-pifidianana no fitaovana iray vaovao tamin'ity fifidianana ity izay tokony hiarovana amin'ny hosoka.
Saingy nilaza ireo tsikera fa misy ny fomba hampiasana ny milina natao ho amin'ny fifidianana kanefa mbola azo angalarana ihany, na dia niaiky aza ny mpikambana ambony ao amin'ny vaomieran'ny fanavaozana ny fifidianana ao amin'ny governemanta fa mety tsy ho azo antoka ny fampiasana izany .
“Tsy isalasalana fa afaka mitondra ny mangarahara amin'ny fifidianana ny fampiasana fitaovana saingy tsy isalasalana ihany koa fa mety hitarika krizy iray hafa ny fampiasana izany”, hoy i Sediqullah Tawhidi, Filoha Lefitry ny Departemantan'ny Vaomiera Manokana momba ny Fanavaozana ny Fifidianana tamin'ny TOLO News.
Kandidà ho ao amin'ny parlemanta mampiasa ny fomba samihafa mba hizarana ny hafany any Herat. Afaka folo andro ny fifidianana ao Afghanistana.